I-Acer iphinda ibambe iincwadana zemidlalo ngeGeForce RT 900 enezixhobo zePredator Triton 2080 | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iilaptop
Kwiminyaka yakutshanje, abavelisi abaliqela baqalisile ukumilisela ilaptops zemidlalo ezijonge thina sinikeze ukusebenza okuphezulu kwisixhobo esinokuthabatha naphi na. Ngaphakathi kuluhlu lweencwadana, eziguqukayo zilawula ukufumana into ebalulekileyo kweli candelo kwaye ubungqina boku bunokufumaneka kwi-Acer Predator Triton 900 entsha.
Inkampani ye-Acer ivelise iilaptops ezimbini ezintsha zemidlalo ezilawulwa yi Windows 10 yenzelwe ukubonelela ngokuthwala okuphezulu kwabo bathanda umdlalo wevidiyo. Sithetha nge-Predator Triton 900 enescreen se-17-intshi kunye ne-4k screen eguqulwayo kunye ne-Predator Triton 500, enescreen se-intshi eziyi-15, ukugqitywa kwentsimbi kunye nobukhulu be-17,9 mm.
Ngelixa iscreen esiguqukayo sePredator Triton 900 isivumela ukuba sibeke esi sixhobo kweyona ndlela ifanelekileyo yokonwabela imidlalo yethu esiyithandayo, iTriton 500 isinika isixhobo esihambelanayo esinechassis yentsimbi efanelekileyo kwabo Kufuneka baphathe izixhobo zabo ukusuka apha ukuya phaya.
Njengoko kuchaziwe nguMlawuli oPhetheyo we-GeForce OEM kwi-NVIDIA:
Siyavuya ukuba i-Max-Q eyenzelwe iGeForce RTX 2080 GPU inceda ekuchazeni kwakhona amava emidlalo yeelaptop. Ngobuchwephesha bobuchwephesha kubandakanya ukulandelwa kwe-ray yexesha lokwenyani kunye nokukhumbula ngokukhawuleza kwe-GDDR6 kwimemori elandelayo, iidrama zinokukhetha ngokuzithemba i-Predator Triton 900 njengeqonga elinamandla, nelityebileyo lokudlala.
1 I-Acer Predator iTriton 900
2 I-Acer Predator iTriton 500
3 Ulawulo oluvela kwi-smartphone
4 Amaxabiso kunye nokufumaneka kweAcer Predator Triton entsha
I-Acer Predator iTriton 900
I-Acer Predator Triton 900 ibandakanya ihenjisi eyenziwe ngomatshini leyo Iyajikeleza, iyaqhubeka kwaye isivumela ukuba sisonge phantsi ikhusi le-intshi eli-17. Esi sixhobo sinika iindlela ezine zokusebenzisa esinokwabelana ngazo nescreen sabahlobo bethu ngelixa sidlala, sidlala ngescreen sokuchukumisa, siyisebenzise njengelaptop yendabuko okanye njengendawo esiguquliweyo ukuba siyisebenzise njengeyilo loyilo.
I-trackpad ihleli ecaleni kwekhibhodi ekuvumela ukuba ubeke izandla zakho kwindawo yendalo yokudlala ngendlela ekhululeke ngakumbi kwaye inobunzima be-23,75 millimeter. Ukongeza, ine-Waves Maxx inkqubo yeaudiyo ebonelela ngesandi sokuntywiliselwa kunye namava e-3D alalelwayo.
Ngaphakathi, Sifumene i-NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU Ngombulelo kwiscreen sayo se-4k IPS, isinika awona mava okudlala aphezulu kwiklasi kunye nokusebenza okuphezulu kwesibhozo se-Intel Core i7 iprosesa ekhatshwa yi-32 GB yememori kunye nokugcinwa, i-SSD RAID OKANYE i-PCIe NVMe.
I-Acer Predator iTriton 500
Umzekelo wePredator Triton 500 usinika i Isikrini se-IPS se-15,6-intshi, i-300 nits yokuqaqamba kunye nenqanaba lokuhlaziya le-144 Hz ngempendulo ye-3 ms, Ubunzima be-2.1 kg kunye ne-17.9 mm ubukhulu, nge-chassis yentsimbi kunye ne-bezels ezi-6,3 mm kuphela, ezisinika isikrini kunye nesigubungela i-81% yomphezulu. Ngokumalunga nokuzimela, le modeli ifikelela kwiiyure ezisi-8 zokuzimela.
Le modeli ifumaneka ngemizobo yeNVIDIA GeForce RTX 2080 yoyilo lweMax-Q, isizukulwane sesibhozo se-Intel Core i7 processor, ukuya kuthi ga kwi-32 GB ye-DDR4 RAM kunye ne-NVMe PCIe RAID 0. Ukongeza, imizobo iyasivumela ukuba sigqithe ngaphezulu ukongeza kwiinkqubo ezixhasayo. ubunyani bokwenyani, ukuguqula esi sixhobo sibe yindawo yonke esinako ngayo yonwabela imidlalo yethu oyithandayo naphina.
Ulawulo oluvela kwi-smartphone
Enkosi nge-PredatorSense app, sinako lawula izixhobo zePredator kwi-smartphone yethu ukuguqula ngaphezulu iisetingi ezingaphezulu, isantya sefeni, ukukhanya, kunye neendlela zomsindo. Ukongeza, sinokuvula iiprofayili ezahlukeneyo ezisetiweyo kwikhompyuter okanye sizitshintshe ukude.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kweAcer Predator Triton entsha
I-Acer Predator Triton 900 izakufika eSpain ngo-Matshi walo nyaka ukusuka kwi-4.199 euro, ngelixa iPredator Triton izakufumaneka ukusuka ngoFebruwari kwaye iya kuqala nge-1.999 euro. Okwangoku, iinkcukacha zemodeli nganye azifumaneki, ke kuya kufuneka silinde kude kube nguFebruwari nango-Matshi ngokwahlukeneyo ukuze bafike kwimarike ukujonga ukuba zeziphi na iinkqubo ezikhoyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-Acer iphinda ibuyise iincwadana zemidlalo ngeGeForce RT 900 enezixhobo zePredator Triton 2080
I-LG isungula i-TV yokuqala ye-OLED eqengqelekayo kwintengiso
IKoogeek: Iimveliso zakho zeZempilo eziPhambili zithengiswa eAmazon